"Kulligood ba kufsada oo cashar u dhiga" : Fadeexad ka dhacday jaamacad Ingiriiska ku taal - BBC News Somali
Digniin: Warbixintan waxa ku jira waxyaabo akhristeyaashu dhibsan karaan.
"Inta guriga degan oo dhan ayaa kufsada oo cashar u dhiga," ayey fariimaha midkood ahayd.
"Alla Ilaahayoow. Haddaan xubinta taranka ee dumarka leeyahay aniguba ma jeclaadeen inaan halkaa joogo" ayay mid kale ahayd.
Anna- ma aha magaceeda dhabta ah- waxay eegaysay boqolaal fariimood oo faroxumayn galmo ah oo la isku weydaarsaday bog Facebook ka mid ah.
Waxa naxdin ku noqotay in iyada iyo saaxiibadeheeda ay jaamacadda wada dhigtaan tobanaan goor magacood lagu sheegay.
Nimanka fariimahaa qorayaa- sida Anna- oo kale ayay jaamcadda Warwick ee UK ka dhigtaan culuumta bulshada.
Laakiin isku fasal keliya uun ma ahayne. Waxay ahaayeen saaxiibadeed oo aad ugu dhaw.
Todobaadadii ka dambeeyey markii Anna ay aragtay fariimahaa, warku wuxu wada gaadhay Jaamacadda. Wax ku bilowday sheeko "u gaara wiilal" ayaa degdeg faraha uga baxay.
Anna iyo gabdh saaxiibadeed ah- oo ka mid ah kuwa fariimahaa waxa lagaga sheegay- ayaa u cawday jaamacadda.
Baadhitaan ka dib, hal arday ayaa la eryey waxaana inta uu nool yahay laga mamnuucay inuu jaamacaddaa galo, laba kale ayaa iyagana 10 sanadood laga mamnuucay oo la eryey laba kalena sannad baa jaamacadda laga joojiyey.
Laakiin markii laba nimankaa ka mid ah mamnuucidii 10 sano ahayd laga yareeyey oo laga dhigay 12 bilood, ayaa waxa su'aalo adag la iska weydiiyey sida jaamacaddu baadhigaanka u samaysay.
Sannad ka dib, jaamacadda weli waxa ka taagan muran oo waxay arday iyo macalimiintuba is waydiinayaan; sidee waxa uga dheceen Warwick?
'Fariimo wiilal u gaara'
Sannadkii hore bilowgiisii, Anna oo markaa 19 jir ahayd, ayaa waxay ku fadhiday kursi yaal guriga ay jaamacadda ka deganayd, waxaana fariimo foolxumi iskaga soo daba dheceen kombuyuurtarka saaxiibkeed.
Siday kuwo kale ugu soo dhacayeen, ayay waydiisay waxay yihiin, isna wuu qoslay.
"Wuxu yidhi hadaad fariimahan wax xun moodayso, bal maad aragtid kuwa kooxdayada wiilasha u gaarka ah" ayay tidhi Anna. "Waana markaa marka uu i tusay fariimo sannad iyo badh la isku dirayey oo hanjabaad kufsi ah"
Markay halkaa fadhiday ayay fariimaha Facebook ku aragtay in isaga iyo saaxiibadii is weydaarsadeen magacayada kuwooda dumarka badan dilay iyo kuwa dumarka badan kufsaday.
"Waxay ka hadlayeen ardayad saaxiibadood ah. waxay ka hadlayeen sida loo afduubay, sariirta loogu xidhxidhay, ee lagu qasbay inay isku kaadido ka dibna kaadidii dhex seexato"'
Qoraalka badankiisu wuu ka sii naxdin badnaa intaa.
"May ahayn hadal iska sahal ah" ayay tidhi Anna "waxay ahayd ummad dhan oo internet-ka ku wada xidhiidhaysa, waanay ku faraxsanaayeen waxaa xun"
Magaceeda ayay ka baadhay fariimihii la is weydaarsanayey. Boqol goor buu ka soo baxay.
Markii hore Anna waxay tidhi saaxiibkeed waxba kamuu soo qaadin fariimhaa oo wuxu ku sheegay "waa sida wiilashu u hadlaan" kaftanna wuu ku sheegay.
Way sii baadhay, markaasay sawirro ka qaaday kolba.
"Waxan u sheegay inaan hubsanayo"ayay tidhi Anna. "Wuu arkayey inaan kolba sii cadhoonayey. Waxaanan u malaynayaa waa markaa marka uu arkay in arintu siduu moodayey ka culustahay"
Isla markiiba hadalkii buu bedelay oo wuxu sheegay inuu ogyahay in fariimuhu yihiin wax aan la qaadan karin oo uu u tusay si uu u ilaaliyo iyada.
Laakiin markay sii eegto fariimaha badan ee ka hadlaya kufsi wadareedka iyo xubnaha taranka oo la jarjaro, waxay dareentay in aan arintu siduu sheegayo ahayn.
"Wax aan sameeyo maan garanayn waayo dadkan fariimaha is weydaarsanayaa waxay ahaayeen dad noloshayda qayb weyn ka ah" ayay tidhi.
Dhawr maalmood ka dib ayay ku noqotay gurigoodii fasaxii Easter-ka. Laakiin xasuusta ah inay noqoto oo nimankii arki doonto ayaa kolba naxdin ku noqonaysey.
"Waxaan u diyaar garoobayey inaan ku noqdo jaamacadda laakiin albaabka guriga waan ka bixi kari waayey" ayay tidhi
Markaa ka dib ayay go'aansatay in ay u cabato jaamacadda.
'Arimo is diiddan'
Markii Anna iyo gabadh kaloo saaxiibadeed ah oo si joogto ah loogu magac dhabay fariimuhu cabasho u gudbiyeen jaamacadda, ayaa lagu wargeliyey in si rasmi ah waraysi loola yeelanayo.
Laakiin mid baa soo baxday: Ninka waraysan lahaa wuxu noqday agaasimaha warfaafinta ee Jaamacadda.
"Waxaan is idhi miyaanay wax la yaable ahayn in isaga laga dhigo qofkii wax baadhayey" ayay tidhi Anna
Maadaama uu yahay madaxa xafiiska warfaafinta, Peter Dunn, wuxuu u xilsaarnaa xidhiidhka warbaahinta iyo ilaalina sumcadda Warwick oo ka mid ah jaamacadaha ugu magaca dheer UK.
Maadaama oo uu yahay sarkaalka baadhitaanka wadana, wuxuu u xilsaarnaa inuu baadho eedaha anshax xumada ah isla markaana uu ka talo bixiyo ciqaabta ay mudanyihiin, hadiiba lagu helo, nimankaa eedaysan.
Dunn labadaa xil buu isku hayey, xataa iyadoo arintu gaadhay warbaahinta dalka markii wargeyska ardayda ee The Boar uu baahiyey ka dib.
Image caption Jaamacadda Warwick
Bishii Feeberweri 2019-kii ayaa jaamacaddu qiratay in "ay dhici karto in ay is diidanyihiin" labada xil ee Dunn laakiin waxay ku adkaysatay in xilkiisii ahaa agaasimaha warfaafinta laga qaaday inta baadhitaanku socdo.
Hase yeeshee, email ay BBC-du heshay ayaa Dunn wuxu dumarka ugu sheegayaa in uu damacsanyahay inuu warbixin siiyo warbaahinta oo ku saabsan baadhitaankii, waxaanu ka codsaday inay uga soo jawaabaan.
"Waxaan dareemay in ay tahay tallaabo xad gudub ah" ayay tidhi Anna "qofkan warbixinta siinaya warbaahintu arimo ii gaar ayuu noloshayda ka ogyahay. Arin walaaceeda leh bay ahayd"
Jaamacaddu waxay BBC-da u sheegay "waanu qiraynaa in su'aalo gar ah laga keenay siday jaamacaddu arintan xasaasiga ah u gashay. Taageero ayaanu la garab taagannahay sarkaalka arintan gacanta ku haya ee Peter Dunn"
Bil ka dib markii dumarka la waraystay, ayaa shan ka mid ah nimankii fariimahaa isku dirayey laga mamnuucay jaamacadda. Laba waxa laga mamnuucay 10 sannadood, laba kalena sannad mid kalena waxa laga mamnuucay inta noloshiisa ka hadhay.
Anna iyo saaxiibadeed laguma wargelin go'aanka baadhitaankii ka soo baxay laakiin waxay ku arkeen uun warbaahinta, taas oo macnaheedu yahay in aanay garan karin nin walba xukunka gaar ugu dhacay.
Laakiin dacwadii halkaa kuma dhamaan. Labada nin ee 10 sannadood laga mamnuucay ayaa racfaan ka qaatay go'aanka.
Afar bilood oo ay sugayeen ka dib oo la sugayey mid ka mid ah shaqaalaha jaamacadda oo fasax ku maqnaa, waxa xukunkii 10 sano ahaa ku soo ururay sannad keli ah.
"Waxba la iima sheegain, waxa na loo sheegay caddaymo cusubi in ay soo baxeen laakiin garan maayo waxa caddaymahaasi yihiin" ayay tidhi Anna. "Waxaan is lahaa waad iloobi doontaa… waxaan dareemay in aniga iyo gabadhii kale ee cabanaysay aanu la garramayno jaamacadd dhan oo aan marnaba na dhegaysanayn."
Anna iyo saaxiibadeed mar kama dambays ah ayay isku dayeen in ay waxay ku diidanyihiin baadhitaankii jaamacadda soo bandhigaan.
Laakiin gudoomiyaha jaamacadda, Prof Stuart Croft, ayaa qoraal uu u diray ku yidhi "ma jirto caddayn muujinaysa in khalad dhacay ama la idinka eexday" waxaanu sheegay in arinkaas halkaa lagu dhameeyey.
Saddex todobaad ka dib, ayaa gabadh ardayad ah oo arintaasi saamaysay Twitter-ka miciinsatay, isla markiiba waxa soo shaac baxay halqabsiga #ShameOnYouWarwick
Warku wuxu mar labaad soo jiitay indhaha warbaahinta oo aad u axadhay. Macallimiinta ayaa si cadaan ah iskaga fogeeyey maamulka jaamacadda.
Isla markiiba Prof Croft ayaa soo saaray warbixin 1000 eray ah oo uu si faahfaahsan ugaga hadlay dareenkiisii markii uu akhriyey fariimahaas, waxaanu sheegay inay "ku beertay dareen aad u naxdin badan".
Laakiin hadalkiisaa ardaydu waxba kamay soo qaadin.
Saddex maalmood ka dib, wuxu shaaciyey in nimankii ciqaabta laga yareeyey aanay jaamacadda ku soo noqonayn. Ma cadda in go'aankaasi yahay mid jaamacaddu gaadhay iyo in nimanku gaadheen toona.
Laakiin arintaasi may demin cadhadii ardayda: laba maalmood ka dib ayaa boqolaal arday iyo macalimiin ahi ku hor mudaharaadeen xafiisyada maamulka sare.
Maalinta mudahaaradku dhacay ayaa jaamacaddu warbixin soo saartay ay ku sheegtay in ay "aad uga xunyihiin" cabsida lagu abuuray dhibaneyaasha.
Dumarka arintu khusaysay raalli gelin toos ah kamay helin jaamacadda.
Dooni maayo inaan dib ugu noqdo
Dhacdadaa Warwick waxay su'aal gelisay sida jaamacaduhu u maareeyaan anshax xumada galamada ee kooxaha internet-ka ku sheekaystaa ku kacaan.
Jaamacaddu waxay bilawday dib u eegis ay ku waddo xeerarkeeda racfaanka anshax marinta waxaanu soo gabagaboobi doonaa xagaaga 2019-ka.
Prof Croft ayaa BBC-da u sheegay inuu rajaynayo in dib u eegistaasi "soo bandhigi doonto wixii arintaa laga bartay oo ay ka caawin doonto ardayda in ay si anshax leh u dhaqmaan."
Laakiin dumarkii arintu taabatay weli ma hayaan wax ay ku iloobaan. Anna oo imika sannadkii saddexaad ku jirta jaamcadda, ayaa isku diyaarinaysa itixaankeedii kama dambaysta ahaa Jimcaha.
"Jaamacaddu waxay igu abuurtay xanuun iyo dhaawac ilaa haatan sannad ka dib dhacdadii i haysta" ayay tidhi.
"Culayska ah inaad dhiirrato oo aad soo baxdo oo haddana sidaa ay kuu gasho jaamacaddu waa waxa ugu xanuunka badan arintan."
"Garan maayo inaan qalin jabinta tagi doono iyo in kale. Intay iga dhamaanayso uun baan sugi la'ahay. Weligay dib ugu noqon maayo."
Wargelin: Jaamacaddu waxay Salaasadii soo saarta warbixin ay kaga falcelinayso warka BBC-da taas oo ay ku tidhi "qayb ahaan baan ka raali gelinaynaa intii aanu ku lahayn ardayda dhibaatadu gaadhay" waxaanay intaa ku dartay in ay samaynayso isbedello "yarayn doona fursadaha khaladaadka noocaas oo kale ahi ku dhici karaan mar dambe."